Ukukhiqizwa Kwe-Hydrogen Okusebenzayo nge-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
I-Hydrogen inguphethiloli ohlukile ongathandwa ngenxa yobungani bayo kwezemvelo kanye ne-zero carbon dioxide. Kodwa-ke, ukukhiqizwa okuvamile kwe-hydrogen akusebenzi kahle ekukhiqizeni inqwaba yomnotho. I-electrolysis ekhuthazwa nge-ultrasonically yamanzi nezixazululo zamanzi ane-alkaline iholela ekutholeni okuphezulu kwe-hydrogen, isilinganiso sokuphendula kanye nejubane lokuguqula. I-electrolysis esizwa nge-Ultrasonically yenza ukukhiqizwa kwe-hydrogen kube nokonga namandla.
Ukusabela okwenziwe nge-Ultrasonically njenge-electrolysis kanye ne-electrocoagulation kukhombisa isivinini sokuphendula esithuthukisiwe, isilinganiso kanye nokuvunwa.
Isizukulwane esisebenza kahle se-Hydrogen nge-Sonication
I-Electrolysis yamanzi nezixazululo ezinamanzi ngenhloso yokukhiqiza i-hydrogen inqubo ethembisayo yokukhiqizwa kwamandla ahlanzekile. I-electrolysis yamanzi inqubo ye-electrochemical lapho kusetshenziswa ugesi ukuhlukanisa amanzi abe amagesi amabili, okuyi-hydrogen (H2) nomoya-mpilo (O2). Ukuze unamathisele i-H – O – H izibopho nge-electrolysis, amandla kagesi agijinywa emanzini.
Ngokuphendula kwe-electrolytic, kusetshenziswa imali eqondile kagesi (DC) ukuqalisa ukusabela okungekhona okwenzeka ngokuhlakanipha. I-Electrolysis ingakhiqiza i-hydrogen yokuhlanzeka okuphezulu ngendlela elula, enobungani bemvelo, inqubo eluhlaza nge-zero CO2 ukukhishwa njengo-O2 ukuphela komkhiqizo.
Amaprosesa we-2x ultrasonic I-UIP2000hdT nama-probe, asebenza njengama-electrode, okuyi-cathode ne-anode. Inkambu ye-ultrasonic iqinisa ukuhlanganiswa kwe-electrolytic kwe-hydrogen emanzini noma izixazululo ezinamandla.
Mayelana ne-electrolysis yamanzi, ukuhlukaniswa kwamanzi kube yi-oxygen ne-hydrogen kutholakala ngokudlulisa amandla kagesi emanzini.
Emanzini amsulwa ku-cathode ekhokhiswe kabi, kwenzeka ukunciphisa lapho ama-electron (e−) avela ku-cathode anikelwa kuma-hydrogen cations ukuze kwakheke igesi le-hydrogen. Ku-anode ekhokhiswe kahle, kwenzeka ukusabela kwe-oxidation, okwenza igesi yomoya-mpilo ngenkathi unikeza ama-electron ku-anode. Lokhu kusho ukuthi, amanzi aphendula ku-anode ukwakha i-oksijini kanye nama-hydrogen ions (proton) akhokhiswa kahle. Ngaleyo ndlela okulandelayo kwesibalo samandla esele kuqediwe:
2H+ (aq) + 2e– → H2 (g) (ukunciphisa ku-cathode)
2H2O (l) → O2 (g) + 4H+ (aq) + 4e– (i-oxidation ku-anode)
Ukusabela sekukonke: 2H2O (l) → 2H2 (g) + O2 (g)
Imvamisa, amanzi ane-alkaline asetshenziselwa i-electrolysis ukuze kukhiqizwe i-hydrogen. Usawoti we-alikhali ungama-hydroxide ancibilikayo wezinsimbi ze-alkali nezinsimbi zomhlaba ezinama-alikhali, okuyizibonelo zazo ezivamile: “i-caustic soda ”) ne-potassium hydroxide (i-KOH, eyaziwa nangokuthi “i-potash ebabayo ”). Kusetshenziswa i-eletcrolysis, ikakhulukazi kusetshenziswa ukugxila okungu-20% kuya ku-40% kwesixazululo se-caustic.
Uphenyo lwe-Ultrasonic lwe- I-UIP2000hdT isebenza njenge-anode. Amagagasi asetshenzisiwe e-ultrasonic aqinisa ukuhlanganiswa kwe-electrolytic kwe-hydrogen.
I-Ultrasonic Synthesis ye-Hydrogen
Lapho i-hydrogen gas ikhiqizwa ekuphenduleni kwe-electrolytic, i-hydrogen ihlanganiswa khona kanye lapho kungenzeka ukubola. Ubuso bama-electrode yindawo, lapho ukwakheka kwe-hydrogen kwenzeka esigabeni samangqamuzana ngesikhathi sokuphendula kwe-electrochemical. Ama-molecule e-hydrogen nucleate ebusweni be-electrode, ukuze kamuva ama-bubbles egesi e-hydrogen abekhona azungeze i-cathode. Sebenzisa ama-electrode e-ultrasonic kuthuthukisa impedance yomsebenzi kanye ne-impedance yokuhlushwa futhi kusheshisa ukukhuphuka kwamabhamuza e-hydrogen ngesikhathi se-electrolysis yamanzi. Ucwaningo oluningi lukhombisile ukuthi ukukhiqizwa kwe-hydrogen hydrogen kwandisa isivuno se-hydrogen kahle.
Izinzuzo ze-Ultrasonics ku-Hydrogen Electrolysis
Izithelo eziphezulu ze-hydrogen
njengoba imiphumela ye-ultrasound ku:
Ukwehliswa okusheshayo kwe-impedance enqwabelene
Ukwehla kwamandla kagesi we-ohmic
Ukusabela okuncishisiwe kungaphezu kwamandla
Ukwehla kwamandla okubola
Ukwehliswa kwesisombululo samanzi / samanzi
Ukuhlanzwa kwama-electrode catalysts
Imiphumela ye-Ultrasonic ku-Electrolysis
I-Ultrasonically ejabule i-electrolysis yaziwa nangokuthi yi-sono-electrolysis. Izici ezahlukahlukene ze-ultrasonic zethonya lemvelo le-sonomechanical ne-sonochemical futhi zikhuthaze ukusabela kwe-electrochemical. Lezi zinto ezinomthelela ku-electrolysis ziyimiphumela ye-cavitation eyenziwe nge-ultrasound nokudlidliza futhi ifaka ukusakazwa kwe-acoustic, ama-micro-turbulences, ama-microjets, amagagasi ashaqisayo kanye nemiphumela ye-sonochemical. I-Ultrasonic / acoustic cavitation yenzeka, lapho amandla amakhulu we-ultrasound ahlanganiswa abe uketshezi. Isimo se-cavitation sibonakala ngokukhula nokuwa kwamabhamuza okuthiwa yi-cavitation. I-bubble implosion imakwe ngamandla amakhulu, amandla asendaweni. La mandla afaka ukushisa kwasendaweni okufika ku-5000K, ingcindezi ephezulu efinyelela ku-1000 atm, kanye namazinga amakhulu okushisa nokupholisa (> 100k / sec) futhi avusa ukuxhumana okuhlukile phakathi kwendaba namandla. Ukwenza isibonelo, lawo mabutho e-cavitational eimpact hydrogen bondings emanzini futhi enze ukuhlukaniswa kwamaqoqo amanzi okugcina kubangele ukuncipha kokusetshenziswa kwamandla kwe-electrolysis.
Umthelela we-Ultrasonic kuma-electrode
Ukususa imali ebusweni be-electrode
Ukwenza kusebenze ingaphezulu le-electrode
Ukuthuthwa kwama-electrolyte kuya nokude kuma-electrode
Ukuhlanza nokwenza kusebenze izindawo
Ukudluliswa kwemisa kungenye yezinto ezibalulekile ezinomthelela kuzinga lokuphendula, isivinini, kanye nokuvunwa. Ngesikhathi sokuphendula kwe-electrolytic, umkhiqizo wokuphendula, isb. Uyanqwabelana, uqoqana nxazonke futhi ngqo kuzindawo ze-electrode futhi kunciphise ukuguqulwa kwe-electrolytic kwesisombululo esisha ku-electrode. Izinqubo ezithuthukiswa nge-Ultrasonically zibonisa ukudluliswa kwesisindo okwandisiwe kusixazululo senqwaba futhi eduze kwendawo. Ukudlidliza kwe-Ultrasonic kanye ne-cavitation kususa izingqimba zokudlula kuzindawo ze-electrode futhi kuzigcine ngaleyo ndlela zisebenza ngokugcwele ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, i-sonification yaziwa ngokwenza ngcono izindlela zokuphendula ngemiphumela ye-sonochemical.
I-Lower Ohmic Voltage Drop, Ukuphendula Okungaphezulu Kokuqina, Nokubola Okungenzeka
Amandla we-voltage adingekayo ukuze i-electrolysis yenzeke yaziwa njengamandla okubola. I-Ultrasound inganciphisa amandla okubola adingekayo kuzinqubo ze-electrolysis.
Iseli le-Ultrasonic Electrolysis
Okwe-electrolysis yamanzi, ukufaka amandla we-ultrasonic, igebe le-electrode, kanye nokuhlushwa kwe-electrolyte yizinto ezibalulekile ezithinta i-electrolysis yamanzi nokusebenza kwayo.
Ukuze kutholakale i-alkaline electrolysis, iseli ye-electrolysis enesisombululo esinamandla esimanzi ngokuvamile esetshenziswa ngama-20% -40% KOH noma i-NaOH. Amandla kagesi asetshenziswa kuma-electrode amabili.
Ama-electrode catalysts angasetshenziswa ukusheshisa isivinini sokuphendula. Isibonelo, ama-electrode e-Pt ayathandeka njengoba ukusabela kwenzeka kalula.
Izindatshana zocwaningo lwesayensi zibika ukonga u-10% -25% kusetshenziswa i-electrolysis ekhuthazwa ngamanzi.
Ama-Ultrasonic Electrolyzers Wokukhiqizwa Kwe-Hydrogen ku-Pilot ne-Industrial Scale
Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa asezimboni e-ultrasonic akhelwe ukusebenza kwe-24/7/365 ngaphansi kokulayishwa okugcwele nasezinhlelweni zomsebenzi osindayo.
Ngokunikeza amasistimu e-ultrasonic eqinile, ama-sonotrode akhethekile (ama-probes) aklanyelwe, asebenza njenge-transmitter ye-electrode ne-ultrasound ngasikhathi sinye, kanye nama-electrolysis reactors, i-Hielscher Ultrasonics inakekela izidingo ezithile zokukhiqizwa kwe-hydrogen electrolytic. Onke ama-ultrasonicators ezimboni zedijithali ochungechunge lwe-UIPUIP500hdT (500 watts), I-UIP1000hdT (1kW), UIP1500hdT (1.5kW), I-UIP2000hdT (2kW), futhi I-UIP4000hdT (4kW)) amayunithi we-ultrasonic asebenza kahle kakhulu wezinhlelo zokusebenza ze-electrolysis.
0.02 kuye ku-5L 0.05 kuye ku-1L / min UIP500hdT
0.07 kuya ku-15L 0.15 kuye ku-3L / min UIP1500hdT
I-Hydrogen iyinto yamakhemikhali enophawu H nenombolo ye-athomu 1. Ngesisindo esijwayelekile se-athomu esingu-1.008, i-hydrogen iyinto elula kunazo zonke etafuleni lezikhathi. I-Hydrogen iyisithako samakhemikhali esichichima kakhulu endaweni yonke, esakha cishe u-75% wabo bonke ubunzima be-baryonic. H2 yigesi eyakha lapho ama-athomu amabili e-hydrogen ehlangana futhi abe yi-molecule ye-hydrogen. H2 ibizwa nangokuthi i-hydrogen yamangqamuzana futhi iyi-diatomic, i-homonuclear molecule. Iqukethe ama-proton amabili nama-electron amabili. Njengoba inecala lokungathathi hlangothi, i-hydrogen yamangqamuzana izinzile futhi ngaleyo ndlela ifane kakhulu ne-hydrogen.
Lapho i-hydrogen ikhiqizwa ngezinga lezimboni, ukuguqula umusi igesi yemvelo kuyindlela yokukhiqiza esetshenziswa kakhulu. Enye indlela i-electrolysis yamanzi. Iningi le-hydrogen likhiqiza eduze kwendawo lapho lizosetshenziswa khona kamuva, isb. Eduze kwezindawo zokucubungula uphethiloli (isib.